Ngokukhawuleza i-Spotify iza kuza kwi-Apple Watch | Ndisuka mac
I-Spotify kungekudala iza kuza kwi-Apple Watch
Nabani na obetha kuqala, ubetha kabini. Yiyo le nto icace kuthi emva kokubona yonke into eyenzekileyo ngesicelo seApple Watch ekufuneka inyaniseke ixesha elide, ewe, sithetha ngeSpotify. Kule meko ixesha elithile eladlulayo ukuba umphuhlisi u-Andrew Chang, wenza isicelo seApple Watch ebizwa ngokuba yiSpotty kwaye igama elifana nesicelo ngokwalo lenze ukuba abaphuhlisi beSpotify bagxume kuye. Emva koko iapps yabizwa ngokuba yiSnowy Kodwa abadali beSpotify babemangalisiwe yile app kaChang kangangokuba bagqiba kwelokuba basebenze naye ukumilisela usetyenziso olutsha kwaye ngoku sinokuba nesicelo esisemthethweni seSpotify kwiApple Watch.
Umphuhlisi weqhwa uthi kwingxelo:
Molweni nonke, enkosi ngonyamezelo lwenu nokuqonda kwenu. Ndonwabile ukwazisa ukuba ndiza kusebenza neSpotify ukuzisa iSnowy kwiApple Watch njengeapp esemthethweni yeSpotify. I-SDK enamandla ye-Spotify ye-Spotify yenza ukuba kuphuhliswe iSnowy, andinakulinda ukuthatha izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo ngobuchule kunye nezixhobo ezikhoyo kwiSpotify. Nangona ndingenakho ukunika uqikelelo lokuba iya kufumaneka nini, le app izakufumaneka kungekudala kubasebenzisi beApple Watch.
Ke ngaphandle kokuba ube nomhla othile wesicelo seSpotify esisemthethweni seApple Watch, kucacile ukuba siyabulela ngomsebenzi wokuqala owenziwe nguTshintsho, ngoku usetyenziso olusemthethweni lwesixhobo sesihlahla lusondele ekubonisweni kwaye konke enkosi kwinyathelo lokuqala ngeSpotty. Kungekudala siza kuba nakho ukonwabela usetyenziso olusemthethweni lwesi sidlali somculo sidumileyo sokujonga iApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Spotify kungekudala iza kuza kwi-Apple Watch
I-iTunes Connect iya kuvalwa iiyure ezisi-8 ngo-Epreli 22
Abanye abaSebenzisi beMacBook Pro abali-15 baNgxelo ngemicimbi yesandi